IApartment ejongene nePool yeyona ndawo igqwesileyo - I-Airbnb
IApartment ejongene nePool yeyona ndawo igqwesileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRachita
I-Apartment ikwindawo esembindini, kwindawo entle yekhondom enazo zonke izibonelelo ezisisiseko ezifana nejimu, ilifti, indawo yokuqubha, i-wifi enesantya esiphezulu, indawo yokupaka kunye nokhuseleko. I-Baga Beach ikumgama nje oyi-1 Km. Umtsalane wabakhenkethi kunye nezinto eziluncedo zikufutshane kwaye zifikeleleka lula.
Eli lichibi elihle elijongene neflethi elinembono yepanoramic yeenduli ngasemva yiyo loo nto le complex ibizwa ngokuba yi "Riviera Foothills". Le ndlu 'Yodwa' njengoko inegumbi lokulala elivulekileyo, kunye nekhubalo lasePhuthukezi elithandekayo elikwimo yepowusta yamandulo eneebhedi ezine kunye nekhabhathi. Ukuhambisana noku, zonke izinto zangoku ezifana nomabonwakude onoqhagamshelo lwentambo, ifriji, imicrowave, umenzi wekofu yeti, isipheko sokungeniswa, ibhodi yoku-ayina, umatshini wokuvasa ozenzekelayo, isicoci samanzi se-RO, i-wifi enesantya esiphezulu, njl.njl. I-sofa-cum-bed eyongezelelweyo inikezelwe ukuququzelela iimfuno zentsapho encinci. Izinto eziluncedo ezifana nelinen yokulala, izitya, izinto zokucheba kunye nezixhobo zokupheka nazo zinikezelwe. Ukucocwa kweveki nganye kwenziwa ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo kwaye ukucoca okongeziweyo kunokucwangciswa kwizinga le-Rs 250 / - ngosuku.
Le ndlu ikwi-upscale Arpora, kwiSithili saseBaga, eNorth Goa. Ibekwe embindini womsebenzi oneendawo zokutyela ezininzi ezidumileyo kumgama wokuhamba okanye umgama omfutshane wokuhamba. Imakethi edumileyo yangoMgqibelo ebusuku kukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka kwiApartment, ngelixa iKlabhu yasebusuku ePhezulu - iClub Cubbana ikumgama wokujula ilitye.
Indawo yokuhlala ngokucwangcisekileyo ihlala embindini wazo zonke iilwandle ezidumileyo zaseGoa. Olona lwandle ludumileyo lweBaga luhambo lwemizuzu engama-25 okanye uhambo olulula lwemizuzu emi-5. Ezinye iilwandle ezidumileyo ezifana neCandolim kunye neCalangute yimizuzu eli-15 yokuqhuba ukuya eNtshona ngelixa iilwandle ezinjengeVagator kunye neAnjuna ziyi-15 - 20 imizuzu yokuqhuba ukuya eMpuma.
Le ndlu ibekwe kwi-preimium Condomium ethathwa njengenye yezona ndawo zigcinwe kakuhle eMantla Goa. I-Complex inezinto eziluncedo ezinjengokupaka iimoto simahla, indawo yokuqubha, indawo yokwenza umthambo, ilifti kunye nenkonzo yokhuseleko yeeyure ezingama-24.
4.75 out of 5 stars from 257 reviews
4.75 · Izimvo eziyi-257
Le ndlu ikwindawo esembindini eNorth Goa kungoko ilingana (malunga ne-15-20 min drive) ukuya kwiilwandle ezinjengeCandolim, Vagator kunye neAnjuna. Iklabhu yeCabana elinganiswe yeyona klabhu yasebusuku ingcono eGoa kwaye imakethi yasebusuku yangoMgqibelo ikumgama wokuhamba ukusuka kwindlu. Ulwandle lwaseBaga oludumileyo kunye nolwandle lwaseCalengute lumalunga nekhilomitha enye.
Umbuki zindwendwe ngu- Rachita